Khetha Kumaqalisi Ayishumi Aphuma Kakhulu e-Android | Izindaba zamagajethi
Ukuhlanganiswa kweziqalisi ezi-10 ezinhle kakhulu ze-Android
Umbulali Uviniga | | Android, Software
Unayo idivayisi entsha yeselula? khona-ke ngokuqinisekile uyazama ube "nobuso obusha" edeskini elifanayo, isimo esizokushukumisela ukuthi uzame ukuthola uhlelo lokusebenza olukhethekile esitolo se-Google Play; ngaphandle kokwenza ukusesha okude okungenazitheloKulesi sihloko sizokhuluma ngalabo ababhekwa njengabaqalisi abahamba phambili be-Android.
Ngaphambi kokuqala ukusho ukuthi ziyini ithathwa njengabaqalisi abayi-10 abaphezulu be- Android, Sizozama ukuchaza ukuthi leli gama elincane limeleni. Isiqalisi siba yigama le-Anglo-Saxon elisho ukuthi "Isiqalisi" futhi elisebenza njengohlelo olushintsha (kokunye, luthuthukise) isikhombimsebenzisi sedeskithophu yohlelo lokusebenza lweselula. Ngenxa yokuhlukahluka okukhulu nokwehluka Kwabaqalisi okukhona namuhla, umsebenzisi kufanele azame ukukhetha okufanela ukunambitheka kwabo (ngokubukeka) nemisebenzi eyakhiwe ngayo.
1 1. Isiqalisi sendali
2 2. I-Apex Launcher
3 3. UNova Launcher
4 Isiqalisi se-Buzz
5 5. Iya Isiqalisi EX
6 6. Solo Launcher
7 7. Isiqalisi Esilandelayo
8 8.isiqalisi 7
9 Isiqalisi Sangempela
10 Igobolondo le-Yandex elingu-10
1. Isiqalisi sendali
Okokuqala, kufanele sisho ukuthi lesi siqalisi sinezindleko okufanele sizikhokhe (njengabaningi esizokhuluma ngabo ngezansi), mhlawumbe lokhu kungumkhawulo omncane walabo abazama ukuba nesikrini esenziwe ngezifiso kudeskithophu Android Mahhala; Izinto ezilula ezibaluleke kakhulu (ngokusho konjiniyela) zigxila ebukhali bokusesha amafayela ethu, sikwazi ukwenza ngokwezifiso amawijethi ethu abaluleke kakhulu ezansi njengebha yamathuluzi, siphinde silungiselele igridi encane enezinyathelo ezithile zokuhlelwa ngakunye kwalokhu izithonjana.
2. I-Apex Launcher
Phakathi kwazo zonke izici zalesi Launcher, mhlawumbe okubaluleke kakhulu kusendleleni yokusabalalisa iwijethi ngayinye ngenxa yokwenza ngokwezifiso ubukhulu begridi; Umsebenzisi uzokwazi ukuchaza ukuthi ngabe uyawafuna yini la mawijethi kumigoqo evundlile noma, uma ehluleka lokho, kumabha amile aqonde ohlangothini olulodwa lwesikrini.
3. UNova Launcher
UNova usevele unedumela elibanzi kulo mkhakha, abeze ukuzonikeza izindlela ezihlukile okwesikhashana. Isiqalisi se-Nova sisiza ukwenza ngezifiso isizinda sedeskithophu, ukwakheka kwamanye amawijethi, ithuba lokubuyekeza izinhlelo zokusebenza kumawindi ahlukile (njenge-imeyili yethu ye-Gmail), ukudlula kusuka esikrinini esisodwa kuya kwesinye ngesitayela se-3D, phakathi kwezinye izindlela zokuhlanganisa.
Ngaphandle kokuba isiqalisi, abathuthukisi basho ukuthi kuyisevisi engatholwa nge-Google Play; Lokhu kungenxa yokuthi umsebenzisi angalanda noma iyiphi idizayini yethempulethi evumelana nalokho abakuthandayo nezidingo zabo, kukhona okungaphezulu kuka-100.000 kumaseva ayo futhi okuzosetshenziswa ngokushesha uma sekukhethiwe, konke kusevisi ye-HomePack Buzz
5. Iya Isiqalisi EX
I-Go Launcher EX iba uhlobo lokwehluka kwesiqalisi esishilo ngenhla, ngoba kulokhu ungakhetha futhi phakathi kwezindikimba ezi-100.000 ezahlukahlukene ukuze zifakwe ngokushesha njengesikrini sasekhaya sedeskithophu Android.
Isici esibaluleke kakhulu salesi siqalisi sikuzaziso; umsebenzisi uzokwazi i-imeyili ngayinye efinyelele ebhokisini labo lokungenayo, noma ngemilayezo evela kumanethiwekhi abo omphakathi kodwa ngendlela ebabazekayo kunaleyo ejwayelekile.
7. Isiqalisi Esilandelayo
Lesi siqalisi silungiselelwe ngabathuthukisi abafanayo nalaba okukhulunywe ngabo ngenhla; isici sayo esibaluleke kakhulu isici se-3D njengengxenye yesikrini sasekhaya; ubuso nobunye obuyingxenye yalomklamo wezinhlangothi ezintathu bungaqukatha izinhlelo ezahlukahlukene ezenziwa ngaleso sikhathi.
Kwabaningi, le Launcher isuselwa kulokho okunganconywa ku-Windows Phone 8, ngoba kunomklamo ofaka phakathi amathayili afana nalawo ahlongozwa yiMicrosoft kusistimu yayo yokusebenza yeselula.
Kulabo abafuna ukuthi izinhlelo zabo ze-Android zihleleke kangcono futhi zihleleke kahle, le Launcher izobasiza ukuthi bonke bahlukaniswe kahle, ngenxa yamalebula ahlukene okukhulunywe ngawo ku-Google play nokuthi i-Launcher isebenzisa ukuwayala kanjani .
Igobolondo le-Yandex elingu-10
Lapha kunalokho singancoma uhlobo lwe-carousel ye-3D, lapho ubuso nobuso obuyingxenye yayo buzokwenziwa obenzelwe ngumsebenzisi ngencwadi yokuxhumana, isikrini sasekhaya esifanayo, izindaba ezimayelana nesimo sezulu noma ithrafikhi phakathi kwezinye izinketho eziningi.
Kubantu abaningi, laba baqalisi bakwenza kube ngabaphezulu kwabangu-10, kepha kungahlala kumangazi noma okunye ukufunda ngakho, ngakho-ke uma ukwazi, wonke umuntu uzothanda ukukulinganisela.
Imininingwane engaphezulu - I-Android: ungakugwema kanjani ukuthenga ngaphakathi nohlelo nge-Google Play
Ukulanda - Isiqalisi Se-Auction, Isiqalisi se-Apex, Isiqalisi se-Nova, Isiqalisi se-Buzz, Iya kusiqalisi EX, I-Laolo Launcher, Isiqalisi Esilandelayo, Isiqalisi se-7, Isiqalisi Sangempela, i-Yandex Shell
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ukuhlanganiswa kweziqalisi ezi-10 ezinhle kakhulu ze-Android
IKillzone: Ukubuyekezwa kweShadow Fall
Ifunda ukuphatha amafayela wethu ngeWindows Live Photo Gallery